I-YG-13 encinci yokujikeleza kwe-rotary rig ifakiwe kwi-Xugong XE55DA okanye eShanhe Intelligent SWE60E main excavator main. Ngokuhlengahlengisa i-engile yokusebenza kunye ne-radius esebenzayo, kukhethwe iibithi ezifanelekileyo zokugrumba, kwaye ubuninzi beplanga yokugrumba i-rig kunokuba yi-1000 mm.
I-YG-13 encinci yokujikeleza kwe-rotary rig kukhetho lokuqala lokomba kwindawo emxinwa. Ngaba ungangena ngokulula kwi-rig enkulu yokugrumba ayinakungena kwisiza kwimisebenzi yokugrumba, enjengegumbi lekhetshi, ingaphakathi lokwakha, ii-eves eziphantsi, ukuqinisekiswa okuncinci kwesiza. Le modeli isetyenziswe ngokubanzi kulwakhiwo lwezixhobo zesiseko sepali yendlela encinci yomasipala, uhola wendlela kunye nombane kaloliwe.
I-YG-13 encinci yokujikeleza kwe-rotary rig yincinci enobubanzi bokujikeleza bokujikeleza ngokusebenza kakuhle kunye neendleko zokusebenza eziphantsi. Ubungakanani bayo be-fuselage bulinganisiwe, kulula ukuhambisa kunye nokusetyenziswa. Le rig ilungele iikontraki ezincinci. Enye into ebalulekileyo ye-YG-13 encinci yokujikeleza i-rotary rig kukuba umbhobho wokubhola awususwanga ngexesha lokuhamba, ngaloo ndlela ulondoloze ixesha lokufaka i-rig kwisiza.
efakwe kwi-main Xrong excavator mainframe
Ubuninzi bequla lamanzi
Uhambo lweNtloko yaMandla
Ukuphakanyiswa kwevolumu iyonke
I-sub-roll ilinganise ukuphakamisa
Isisu semoto esilandiweyo
Ubunzima bomatshini uphela malunga
Injini ephambili yeShanhe Intelligent Excavator
Egqithileyo Isithuthi esincinci esincinci
Okulandelayo: XR150DⅢ bokujikeleza Drilling Rig
Mini kumngxunya wokugrumba Machine
Umatshini ojikelezayo ojikelezayo oMncinci